Izinto ezikhethekile noma izindawo zohlelo lokusebenza zidinga ukucutshungulwa okukhethekile.
I-flux esetshenziswe ngesikhathi senqubo evamile yokwenziwa kwe-brazing imvamisa iyimbangela yokugqwala nokusha emsebenzini. Ukufakwa kwe-Flux nakho kungaholela ekuthikanyezweni kwezakhi zento. Ngaphezu kwalokho, ngenxa yomoya-mpilo okhona emoyeni ukuguqulwa kombala komsebenzi kusebenza.
Lezi zinkinga zingagwenywa lapho kufakwa isibambo ngaphansi kwegesi engenalutho noma nge-vacuum. Indlela yegesi ye-inert ingahlanganiswa kahle kakhulu nokushisa okungenayo njengoba kungekho ilangabi elivulekile ngesikhathi sokubanjwa kwe-induction ngaphansi kwegesi evikelayo futhi izimo ezihlobene nokugeleza zingalawulwa kangcono.
Izigaba Ubuchwepheshe Amathegi ukugqolozela, ukuboshwa kwegesi okuvama kakhulu, ukukhishwa kwegesi okungenayo, lokungeniswa igesi inert heater, Ukushisa kwegesi okungenayo, ukuncibilika kwegesi lokungeniswa, ukufakwa kwegesi okufakwa ngaphakathi, igesi engena, ukufakwa kwegesi okungenayo, inqubo yokubamba igesi engenayo, ukufudumeza igesi okungenwa, igesi engenayo yokungeniswa kwegesi, Ukushisa kwe-inert gas induction, i-inert gas soldering Imeyili kwemikhumbi